/ ngwaahịa / R & D mmeghachi omume / Pyridoxal hydrochloride ntụ ntụ
SKU: 65-22-5. Category: R & D mmeghachi omume
Molekụla Formula: C8H10ClNO3
Ọbara arọ: 203.62
Ọ gwụla ma ị na-aṅụ ọgwụ na-eme ka vitamin B6 mebie ma ghara ịmepụta mkpụrụ ndụ B ndị ọzọ (dị ka penicillamine ma ọ bụ Isoniazid), ị ga-ewere usoro "B zuru ezu". Nke ahụ bụ n'ihi na vitamin B na-arụ ọrụ ọnụ. Lee ụfọdụ ihe atụ:
Ụkpụrụ homocysteine, ihe na-egbu egbu nke metụtara ọrịa obi na Alzheimer, dabeere na pyridoxine (B6), niacin (B3), na cobalamine (B12).
Ndị nwere obere ọganihu nke B6 nọ n'ihe ize ndụ dị ukwuu nke ọrịa obi, ma ọrịa ọrịa obi na-adịghị ala ma ọ bụrụ na ha enwetaghị B6 na folic acid.
Dị ka ị nwere ike ịchọpụta ebe ọzọ na saịtị a, B6 supplementation nwere ike inye aka na acne / rosacea, autism, nsogbu uche na-adịghị mma na ọrịa mgbochi ọrịa (ADHD), ọrịa arthritis rheumatoid, allergies, ịda mbà n'obi, homocysteine ​​dị elu, ọrịa obi, elu lipid ọkwa , ịda mbà n'obi, ọrịa ụtụtụ, ịda mbà n'obi nke metụtara ime afọ, ịda mbà n'obi metụtara ọgwụ mgbochi ime, nkwonkwo ụbụrụ na ọrịa dysphoric oge ochie, mgbaàmà nke ndị ikomopause, ịda mbà n'obi nke afọ na mgbakasị ncheta nke Alzheimer's, muscle cramps, conjunctivitis, ọrịa na-egbuke egbuke, ọbara mgbali elu, njigide mmiri, ọrịa akụrụ ọrịa shuga, ụkwara ume ọkụ, ọrịa ọgbụgba carpal, ọnyá aphthous, ọtụtụ ụdị schizophrenia, vertigo, na oke ibu.
Akwụkwọ ntụziaka nke Pyridoxal hydrochloride